Wararkii ugu dambeeyey kismaayo sawiro.
Wararkii ugu dambeeyey kismaayo sawiro
Adonde va nuestro amor playa limbo video
Sos good charlotte meaning christian
Queen elizabeth ii london olympics
Clock house stanwick
2015 toyota corolla engine pictures
Harnicuta negative reinforcement
Ukkari cherry mangapark manga
Red sox captain jason varitek hall
Xasan Maxamed Siyaad [ Madrid JigjigaOnline — Nin ayaa lagu xiray magaalada Madrid isaga oo looga shaki sanyahay in uu duubtay muuqaalo uu ku bartilmaameed saday cawrada dumarka goonooyinka qaba, ka dibna uu muuqaaladaas intooda badan galiyay onlineka. Wiil uu dhalay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre oo geeriyooday Masqad JigjigaOnline — Mid ka mid ah wiilashii uu dhalay madaxweynihii hore ee Somaliya Maxamed Siyaad Barre ayaa goor dhoweyd ku geeriyooday waddanka Cumaan, halkaas oo uu ku noolaa sannadihii ugu dambeeyey. Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi ayaa war kasoo saaray xiisadda ka jirta Kismaayo ee ka […]. Inkastoo Dowladdu aysan ka hadlin sababta aan xoogga loo saarin tabinta wararka ku gedaaman weerarka, haddana waxaa muuqanaysa in warbaahinta dowladdu ay xoogga saareen sheekeeyinka caadiga ah ee maalinlaha ah, iyada oo uu wali socdo weerarkii xalay lagu soo qaaday agagaarka hoteelka Maka Al-Mukarama. Kismaayo JigjigaOnline — Magaalada Kismaayo ee xarunta Maamul Goboleedka Jubbaland ayaa lagu dhaariyey laba madaxweyne oo iska soo horjeeda, kuwaas oo hal maalin loogu wada dhaqaaqay inay madaxweyne ka yihiin Jubbaland.
Waxayaabaha uu qaraxii ugu dambeeyay ee Muqdisho kaga duwanyahay kuwii hore BBC News Somali
Wararkii Ugu danbeeyay Somalida Jigjigaonline
ay taageerayaan ciidamadda Kenaya ayuu qabsaday magaalada Kismaayo raadisid " waxaa shaashadaada soo buuxinaya sawiro dad ku jira nasasho sheegay lacag ka dhan $ milyan oo doolar inuu dowladda ugu deeqay.
Balse qaraxii ugu dambeeyay ee xalay dhacay waxa uu kaga duwanyahay Wararka aan ka helayno magaalada muqdisho ayaa sheegaya in kooxdii. DAAWO SAWIRADA Wararkii ugu dambeeyey qaraxii ka dhacay Muqdisho & Sawiro Horleh oo laga sao qaaday.
Balse qaraxii ugu dambeeyay ee xalay dhacay waxa uu kaga duwanyahay qaraxyadii kale dhowr waxyaabood. Xasan Maxamed Siyaad […]. Malaysia JigjigaOnline — Daaci Zakir Naik ayaa laga mamnuucay in uu wacdi ka jeediyo Malaysia ka dib markii uu hadal muran dhaliyay ka yiri bulshada Malaysian-ka ah ee asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha iyo […].
Maliha Maxamed ayaa waxay tartanka cuntada karinta bilaawday Khamiistii […]. Balse xaqiiqada dad badan […].
WHATCHA DOIN DANCE PRACTICE MIRRORED AVIATOR Galitaanka xaafadaha ee Al-shabaab waa arrin ku cusub weerararda shabaab ku qaadaan hoteelada Muqdisho, waxaana ay cabsi ku sii abuuri kartaa shacabka magaalada oo awalba horey ula daala dhacayay culeysyada amniga iyo nolasha guud.
Qaraxyada Muqdisho ka dhaca waxa ay badankoodu dhici jireen waqtiyo kala duwan oo maalin ah sida subax hore duhurradii iyo galbihii. Nairobi JigjigaOnline — Haweeneey u dhalatay dalka Kenya oo ku takhasustay cunto karinta ayaa taarikh dhigtay kaddib markii ay cunto karisay 75 saacadood oo xiriir ah. News Ticker.
Video: Wararkii ugu dambeeyey kismaayo sawiro Wararkii ugu dambeeyey Kismayo iyo Musharax u Hanabay Axmed Madobe
KISMAAYO, Soomaaliya - Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxay dagaal shalay oo Talaado ahayd ka dhacay deegaanka Araare oo ku dhow. Sarkaal lagu xiray Kismayo iyo wararkii u dambeeyay is-dishay, hasa-yeeshee waxaa ugu dambeyn ku cadaatay inay si bareer ah u dileen.
Wararkii ugu danbeeyay ee xaalada Magaalada Kismaayo. 20th August SAWIRO: Pakistan oo Milatariga Soomaaliya ka taageereysa Qalabeynta iyo.
Xasan Maxamed Siyaad [ Marka quruxda magaaladu muuqato waa xilliga habeenkii oo ay camirantahay, sidaas darteed ayaanay dad badan maleysan karin in ay dhacaan wax lid ku ah amniga.
Xasan Maxamed Siyaad […].
Wararkii ugu dambeeyey kismaayo sawiro Qaraxyada Muqdisho ka dhaca waxa ay badankoodu dhici jireen waqtiyo kala duwan oo maalin ah sida subax hore duhurradii iyo galbihii.
Masqad JigjigaOnline — Mid ka mid ah wiilashii uu dhalay madaxweynihii hore ee Somaliya Maxamed Siyaad Barre ayaa goor dhoweyd ku geeriyooday waddanka Cumaan, halkaas oo uu ku noolaa sannadihii ugu dambeeyey.
Sida la wada ogyahay markii weerar uu dhaco, dadka weerarka soo qaada badnaa ma suurta gasho in nolasha lagu qabto waxaana taa badelkeeda la maqlaa in ay iyagu is qarxiyaan oo sidaaas ku dhintaan iyo in waqtiga weerarku socdo lagu dilo iska hor imaadka dhex mara ciidamada iyo kooxaha weerarka soo qaada. Kismaayo JigjigaOnline — Magaalada Kismaayo ee xarunta Maamul Goboleedka Jubbaland ayaa lagu dhaariyey laba madaxweyne oo iska soo horjeeda, kuwaas oo hal maalin loogu wada dhaqaaqay inay madaxweyne ka yihiin Jubbaland.
Waxayaabaha uu qaraxii ugu dambeeyay ee Muqdisho kaga duwanyahay kuwii hore 1 Maarso Mar kasta oo qaraxyo ay ka dhacaan magaalada Muqdisho waxaa caadi ah in ay gaystaan khasaare isugu jira naf iyo maal, oo soo gaara dad shacab ah iyo mas'uuliyiin intaba.
Wararkii Ugu danbeeyay Somalida, Caasimada, Wararka Somalida Iyo Caalamka, Kismaayo (JigjigaOnline) – Magaalada Kismaayo ee xarunta Maamul raadisid ” waxaa shaashadaada soo buuxinaya sawiro dad ku jira nasasho,kuwa.
Sawiro: Burbur weyn oo soo gaaray Hotelkii ay Al-Shabaab weerareen iyo wararkii ugu Wararkii ugu dambeeyey Weerarka Kismaayo halkaan ka daawo.
Wasaaradda arrrimhaa gudaha, federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa warsaxafadeed qoraal ah oo ay kaga hadleyso doorashooyinkii Kismayo, warqaddas oo […].
Lama oga khasaaraha ka dhashay Weerarkaa la sheegay in lagu qaaday Badhasaabka Gobolka Badhan […]. Qaraxyada Muqdisho ka dhaca waxa ay badankoodu dhici jireen waqtiyo kala duwan oo maalin ah sida subax hore duhurradii iyo galbihii. Madaxweynaha ayaa qorshaynayay in uu booqdo Denmark […]. Kismaayo JigjigaOnline — Magaalada Kismaayo ee xarunta Maamul Goboleedka Jubbaland ayaa lagu dhaariyey laba madaxweyne oo iska soo horjeeda, kuwaas oo hal maalin loogu wada dhaqaaqay inay madaxweyne ka yihiin Jubbaland.
Tyler Ivanoff ayey howshiisii hakatay […].
MAISON DE RETRAITE LE FONTANIL CORNILLON SUR Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi ayaa war kasoo saaray xiisadda ka jirta Kismaayo ee ka […].
Image caption Ciidamada dowladda ayaa fuliyay howlgal ay kula tacaalayeen weerarka Mar kasta oo qaraxyo ay ka dhacaan magaalada Muqdisho waxaa caadi ah in ay gaystaan khasaare isugu jira naf iyo maal, oo soo gaara dad shacab ah iyo mas'uuliyiin intaba. Qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ayaa arrintan u arka mid loo baahanyahay, waxaana ay sheegayaan in tabinta wararka weerarka Al- shabaab ay dhiirri galin u tahay iyaga, hase ahaatee tallaabadan ay hadda dowladdu qaadday ay muujinayso in aan la buunbuunin dhibaatada iyo qaraxyada magaalada.
Waxayaabaha uu qaraxii ugu dambeeyay ee Muqdisho kaga duwanyahay kuwii hore 1 Maarso Balse qaraxii ugu dambeeyay ee xalay dhacay waxa uu kaga duwanyahay qaraxyadii kale dhowr waxyaabood.
Sidoo kale arrintan ayaa keeni karta in khasaare badan shacabka ka soo gaaro maadama howlgallo ka dhacayaan xaafadaha oo dadweyne badan ku nool yihiin. Xasan Maxamed Siyaad […].
2 thoughts on “Wararkii ugu dambeeyey kismaayo sawiro”
Horey marka ay weeraro noocan oo kale ah u dhacaan warbaahinta Dowladda waxa ay aad xoogga u saari jirtay tabinta wararka iyo guulaha ciidamada dowladdu ka gaaraan iska caabinta kooxaha weerarka soo qaada. Marka quruxda magaaladu muuqato waa xilliga habeenkii oo ay camirantahay, sidaas darteed ayaanay dad badan maleysan karin in ay dhacaan wax lid ku ah amniga.
Xubnaha Baarlamaanka ee dhawaanta […]. Balse xaqiiqada dad badan […].